Semalt uye SEO
Munyika yanhasi yedhijitari, isu tese takanzwa nezvezvakanakira kuvhura webhusaiti, kugadzira kuvapo kwepamhepo uye kushandura vashanyi vesaiti kuti vave vanobhadhara vatengi.
Kutanga webhusaiti kunonakidza asi ingori kutanga kwekusimudzira bhizinesi pamhepo. Kuita chokwadi kuti inogona kuwanikwa mumainjini ekutsvaga uye kuiisa pamusoro peGoogle mhinduro ndipo panoshanda zvakaoma.
Heino nyaya yekukurumidza iwe. Izvo ndezvemuridzi webhizinesi anoisa mwedzi yenguva uye kushanda mune inopenya webhusaiti itsva kukurudzira mabasa ayo uye zvigadzirwa. Kunyangwe kuedza kwakanyanya uye kuedza kuwedzera traffic, webhusaiti yakaramba iri pasi peiyo injini yekutsvaga uye iyo danho rakakundikana kushandura kuti riwedzere kutengesa.
Inonzwika yakajairika? Nechemumoyo, hazvifanirwe kudaro. Nekushandiswa kweSEO uye webhusaiti webhusaiti, webhusaiti inogona kushandurwa kuitira kuti ichirove nzvimbo dzekumusoro pakutsvaga kwepamhepo.
Sezvo nezvakawanda zvinhu muhupenyu, kushandisa hunyanzvi hunyanzvi kunogona kuenda nenzira refu kana zvasvika kune SEO. Funga nezve musiyano uripo pakati pekushanda kunze kwekurovedza muviri wega kana nemudzidzisi wega. Mhedzisiro dzinenge dziri kungogara dziri nani, dzinokurumidza uye dzakareba kana uchishanda nemurairidzi. Iyo nzira imwechete inogona kuiswa pakugadzira iyo yakabudirira pamhepo nekunyora rutsigiro rweSEO uye vatengesi vekushambadzira kubatsira bhizinesi rako kusimudza kuburikidza neinjini yekutsvaga.
Semalt yakavakwa nechikwata chevanyanzvi vakadaro uye vanga vachibatsira vatengi pasi rese kusimudza chimiro chavo chepa online kweanopfuura makore gumi. Ngatitarisei kuti ndivanani uye kuti vaitei.
Muchidimbu, Semalt is Full-stack Dhijitari Agency nechinangwa chekuita online mabhizinesi abudirire. Iine dzimbahwe muKyiv, Ukraine, Semalt anoshanda nevatengi pasi rese nekupa SEO kukurudzira, webhu kuvandudza uye epamberi analytics services, pamwe nekugadzira anodudzira vhidhiyo yezvinhu.
Semalt iboka revanopfuura zana vekugadzira IT uye vatengesi vekushambadzira - uye inogara peturu turtle Turbo - nemidzi yavo yakaiswa zvakasimba mune tekinoroji yedhijitari. Nekushanda pamwe uye kugovera makore ehunyanzvi, iyo timu yeSemalt yakagadzira iyo yekutanga SEO mhinduro yekubatsira vatengi kusvika kune vanoshuvira zvakanyanya pazvinzvimbo zvepamhepo - iyo yepamusoro yekutsvaga kweGoogle.
Sezvo chero munhu anoshandisa internet azvizive, inowoneka mumakwenzi epamusoro ezve injini dzekutsvaga ndeye online goridhe. Kwete chete iyo inosimudza kuoneka uye inowedzera webhu kutengesa, asi kumabhizinesi eInternet, zvinogona zvakare kukonzera kukwezva vatengi vangangoita uye kuwedzera kwekutengesa.
Saka zvinoshanda sei? Chaizvoizvo, pane sarudzo mbiri: AutoSEO uye FullSEO. Asi chekutanga, kune avo vako iwe usati usina chokwadi nezve zvinorehwa neSEO, heino zvishoma kuparara kosi.
SEO inomira Yekutsvaga Injini Yekutsikisa Izvi zvinoreva kuti injini dzekutsvaga seGoogle dzinogona kuwana chinyorwa chako, bhurogu, kana webhusaiti pakati penyika yakazara nevanhu vepamhepo vozviisa mukati mekutsvaga kwavo. Iyo yakawanda yakagadziriswa yezvinyorwa ndeye injini yekutsvaga algorithms, ipapo yakakwira kumusoro mumigumisiro iyo ichaonekwa.
Zvinonzwika sezviri nyore asi injini dzekutsvaga dzinogara dzichichinja maalgorithms ayo, zvinoreva kuti chingave chakashanda gore rapfuura, hachizoshanda segore rino. Kune zvisingaverengeki zvinyorwa zvinowanikwa pamhepo nemazano ekuti ungagona sei kugadzirisa SEO, asi chimwe chezvishandiso chakanyanya kushandisa ndeye kushandisa mazwi akakosha pane webhusaiti. Zvadaro, iwe unoda kufunga nezve meta tags, kugadzirisa misoro uye mifananidzo, kubatanidza kuvaka uye kugadzira zvakasarudzika zvemukati.
Zvese zviri pamusoro zvinotora nguva uye kuronga, uye kune vazhinji varidzi emabhizinesi, nguva inokosha (kana pane dzimwe nguva chinhu chisingawanike). Ndiko uko masevhisi akadai AutoSEO uye FullSEO anogona kubatsira.
AutoSEO chishandiso chakagadzirirwa emabhizinesi madiki anoda kuwedzera saiti traffic asi anogona kunge asiri kuziva SEO uye asingade kuita danho guru kudzamara vaona chaiyo mibairo.
Iyo sevhisi inotanga nemushumo mupfupi pane zvazvazvino webhusaiti, inoteverwa nekuongororwa kuzere neino SEO nyanzvi yekuona zvikanganiso uye kuona izvo zvinofanirwa kugadziridzwa. Iyo SEO Injiniya inobva yasarudza mazwi ekugadzira traffic anogadzira iwo akakosha kune webhusaiti uye nebhizinesi raanokurudzira. Tevere, tekinoroji yaSemalt inotanga kuvaka zvigadzirwa kune niche-zvine chekuita newebhu zviwanikwa, ane masosi akasarudzwa zvichienderana nezera rezita uye Google Trust Rank.
Kana zvishandiso zvacho zvave panzvimbo, Semalt inopa vatengi nezvekudzokororwa kwezuva nezuva nemazita emakosheswa, uye mishumo yekuongorora inozoita
FullSEO inopa yakabatanidzwa SEO mhinduro kumabhizinesi makuru, vanhu vane makambani akati wandei, kana kune avo vakagadzirira kuisa mari shoma shoma mukugadzirisa webhusaiti uye kushandisa SEO.
Iyo FullSEO sevhisi inotevera nheyo dzakafanana ku AutoSEO, asi zvigadziriso zvakatsanangurwa zvinoenderana nekune zvakadzama kuongororwa, kusanganisira kuongororwa kwevanokwikwidza, uye inovimbisa yakakosha webhusaiti traffic kukura nehupamhi hwekutendeuka. Izvo chaizvo chishandiso chekutumira webhusaiti kumusoro kweGoogle yekutsvaga mhinduro - nekukurumidza.
Nekushandisa FullSEO, timu yaSemalt inoona kuti webhusaiti inoenderana zvizere ne SEO miitiro. Izvi zvinoitwa nekugadzirisa saiti mukati uye kugadzirisa zvikanganiso, sekugadzira meta tags yemashoko akakosha, kuvandudza webhusaiti HTML kodhi, kubvisa zvakaputswa zvinongedzo uye kuwedzera webhusaiti kubatanidza. Zvimwe zvikwaniriso zvepasirose yeSESESE inosanganisira rubatsiro rwakakwana kubva kuSemalt yekuvandudza webhusaiti uye kusikwa kwezvinhu zve SEO-zvine hushamwari. Mhedzisiro yacho ndeye kudzoka kwakanaka pakudyara uye kwenguva refu mhedzisiro.
Sezvaungangofungidzira nezvazvino, kiyi iri kumashure kweSemalt's SEO masevhisi ndeye kushandisa analytics kugadzira yakasarudzika mhinduro kune wese mutengi. Nekudaro, izwi rekuti "webhusaiti analytics" rinogona kuburitsa kuvhiringidzika, saka ngatimboongorora zvazvinoreva uye nemaitiro acho anoshandiswa sei paSemalt.
Chii chinonzi Website Analytics?
Webhusaiti analytics chishandiso chinoshandiswa kuongorora kugona kwekushambadzira kwepamhepo, pamwe nekutarisa nzvimbo yemusika yebhizinesi rako nevanokwikwidza.
Kuongorora nguva dzose kwakakosha kuti unzwisise huwandu hwakazara hwemusika webhizinesi. Izvo hazvizongobatsira chete kumisa akakodzera mazwi eSEO uye kuramba uine ziso pakuita kwevanokwikwidza, asi iyo inogona zvakare kuona mitsva mikana yekuvandudza mhando padunhu, kana nzira itsva dzekuparadzira zvigadzirwa.
Iyo Semalt package inopa mukana kune yese yekuongororwa data inodiwa pakutsvaga kukura kwe webhusaiti uye kuratidza chero zvingave zvipinganidzo. Inosanganisira chaiyo-nguva masheya ekugadziridza, chena-mavara mishumo yekuratidzira mhedzisiro uye sarudzo yedhodha upload kuburikidza neSemalt's API. Iyo zvakare yakaderera mutengo asi inogadzira inobatsira ruzivo rwekubatsira kuzivisa SEO mazano. Iko kushandiswa kwewebsite analytics chikamu chakakosha cheiyo SEO puzzle uye, nerubatsiro rwehunyanzvi, inogona kushandiswa kushandura nzvimbo kuita chishandiso chebhizinesi chinoshanda.
Vanofara vatengi veSemalt
Semalt akashanda pane anopfuura zviuru zvishanu zvemawebhusaiti uye mutengi runyorwa runyorwa pasi rese nemabhizinesi kubva kuhutano nekurarama kune hunyanzvi hwekugadzira zvinhu nepfuma. Vazhinji vatengi vanofara vakataura mhedzisiro yakajeka naSemalt vanogara vachigamuchira dzokororo yepamusoro paGoogle ne Facebook.
Mumwe weavo anofara mutengi ndeye UK-yakavakirwa pamhepo vatengesi pamhepo vanogadzira huchi husvi uye zvigadzirwa zveuchi. Chinangwa chaive chekuita kuti kambani ive muPamusoro-10 chinzvimbo paGoogle uye kuwedzera organic traffic kune webhusaiti. Mukati memwedzi mitanhatu yekushandisa iyo FullSEO sevhisi, traffic yakawedzera ne4,810 muzana, kushanya kwemwedzi webhusaiti kwakawedzera ne12,411 uye huwandu hwemazwi akakosha muGoogle TOP-100 akakwira kubva ku1914 kusvika gumi nemakumi mashanu neshanu. Mutengi akaonekwazve mubhokisi reGoogle "People also Ask" kuGoogle, achiwedzeredza traffic organic kune saiti.
Semalt akazviita sei? Mhedzisiro yacho yakawanikwa nekutanga nekuita yakadzama tekisheni yekuongorora nzvimbo dzekuona nzvimbo dzinoda kuvandudzwa. Iyo yekuongororwa yakazoteverwa nehurongwa hwekudzokorora webhusaiti, sekusimudzira PageSpeed, kugadzirisa webhusaiti uye SEO yezvinyorwa zvakasikwa. Mushure meizvozvo, Semalt akatanga kusimudzira webhusaiti sechikamu chehurongwa hweFSSEO kuburikidza nemushandirapamwe wepamberi wekuvaka webhusaiti. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kune zvimwe zviitiko zvezviitiko zvevanofarira Semalt vatengi, shanyira webhusaiti pano.
Zvino izvo SEO uye analytics webhusaiti yakatsanangurwa, chii chakafanana nekushanda naSemalt?
Kutanga, Semalt ikambani yepasi rese saka kuwana mutauro wakajairika haisi dambudziko. Nhengo dzechikwata ichi vanotaura Chirungu, French, Italian neTurkey, pakati pevamwe.
Chechipiri, kutanga ne AutoSEO zviri nyore nemuedzo wemazuva gumi nemana uchingoita $ 0.99. Izvi zvinoteverwa nesarudzo yekusarudza chirongwa chekumhanya kwemwedzi mumwe, mwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu kana gore rimwe. Iyo yakanaka nzira yekuenzanisira sevhisi usati wasvetukira muFSSEO.
Pakupedzisira, Semalt inopa rubatsiro rwevatengi 24/7, zvinoreva kuti chero kwauri uri munyika, unogona kubata nhengo yeboka kuti uwane rubatsiro uye zano. Iwe unogona kana kusangana nechikwata online nekushanyira About About us peji pane webhusaiti.